5 Siyaabood oo Cajiib ah oo lagu Helo PhD Australia gudaheeda leh deeq waxbarasho 2022
Halkan waxaa ku yaal hage ku saabsan sida aad uga heli karto PhD gudaha Australiya deeq waxbarasho. Helitaanka Ph.D. shahaadada Australiya ma ahan mid adag sida aad u maleyn karto, maqaalkani wuxuu kugu hagi doonaa sidaad u codsan karto oo aan rajeynayo inaad ku guuleysato Ph.D. deeq waxbarasho oo lagu barto Australia.
Shahaadada dhakhtar, dhakhtarka falsafadda, dhakhtarka, darajooyinka dhakhtar waa ereyo loo adeegsado in lagu aqoonsado shahaadada PhD iyo cidda haysata. Waa shahaado aad uga sareysa bachelor-ka, shahaadooyinka jaamacadeed iyo shahaadada mastarka, shahaadada PhD-da ayaa hadda ah nooca ugu sareysa ee shahaado-tacliineed.
Dadka daba gala Ph.D. shahaadada ayaa sidaas u sameysa sababo badan laakiin sabab kasta ha noqotee waxaa laga yaabaa inay la timaado faa iidooyin iyo faa iidooyin badan dhinacyada nolosha oo dhan markii aad dhamaysato barnaamijka aad doorbidayso ee PHD oo aad hesho shahaadada.
1 Sida Loo Helo Shahaadada PhD-da ee Australiya oo leh Deeq waxbarasho
1.1 Australia oo ah Goob wax lagu barto
1.2 Mudo intee leeg ayey PhD ku joogtaa Australia?
1.3 Ardayga PhD ma ka shaqeyn karaa Australia waqti buuxa?
1.4 Waa maxay Qiimaha Barnaamijka Waqtiga buuxa ee PhD-da ee Australia?
1.5 Ma fududahay in PhD laga helo Australia deeq waxbarasho?
1.6 Sideen ugu heli karaa PhD gudaha Australia deeq waxbarasho?
2 Deeqda waxbarasho ee ugu wanaagsan PhD-da Australia
2.1 Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) Deeqda Cilmi-baarista Jaamacadda
2.2 Barnaamijka Tababbarka Cilmi-baarista Dowladda Australia (RTP) Deeqaha
2.3 Jaamacadda Bond Deeqaha HDR
2.4 Deeqda Cilmi-baarista ee Adelaide
2.5 Deeqaha Cilmi-baarista ee Shahaadada Sare
2.5.1 Gunaanad iyo talo soo jeedin
Sida Loo Helo Shahaadada PhD-da ee Australiya oo leh Deeq waxbarasho
Maaddaama aad haysato shahaadada shahaadada PhD, waxaad u muuqataa inaad heshid aqoonsi dheeraad ah, ururada oo dhan, iyo xirfad guuleysi leh aqoonta badan iyo xirfadaha aad ku soo uruurisay deegaankaaga waxbarasho.
Ku barashada shahaadadaada PhD-da ee hay'ad heer caalami ah oo ku taal meel caalami ah oo loo yaqaan daraasad ayaa si isku mid ah u kobcin doonta fursadahaaga guusha.
Australia waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee wax lagu barto adduunka iyada oo kumanaan arday ah ay halkaas ku soo qulqulaan sannad kasta si ay u daba galaan oo ay u helaan shahaadadooda ay doorbidaan waxayna leeyihiin qaar ka mid ah barnaamijyada shahaadada ugu sareysa ee PhD adduunka.
Sidoo kale, barashada shahaadada PhD-da ee Australia waxay leedahay faa iidooyinkeeda kale, sida barnaamijka deeqaha waxbarasho oo in kabadan boqol ufuran yihiin ardayda PhD way dalban karaan oo ay heli karaan maalgalinta waxbarashadooda.
Australia oo ah Goob wax lagu barto
Australia waxay kujirtaa seddexda waxbarasho ee ugu sareysa aduunka ku hadla luuqada Ingiriiska, machadyadeeda aduunka waa laga aqoonsan yahay waxayna bixiyaan waxbarasho heer caalami ah dhamaan heerarka waxbarasho oo ay kujiraan shahaadada PhD.
Sidoo kale, in badan oo ardayda caalamiga ah waxay doortaan inay wax ka bartaan Australia sababtoo ah dhaqamadeeda kala duwanaanta, dadka u dhashay iyo saaxiibadooda tayada sare leh ee waxbarashada, shahaadooyinka waxaa aqoonsan ururada adduunka oo idil.
Australia waa meel xiiso leh oo wax lagu barto lagana kasbado shahaado laakiin haddii aadan halkaas tagi karin, way fiicantahay, weli waad ku baran kartaa wax kasta oo aad xiiseyso jaamacadaha internetka ee ugufiican Australia oo wali aad heysato shahaadadaada shahaadada.
Mudo intee leeg ayey PhD ku joogtaa Australia?
Waxay kuxirantahay goobtaada waxbarasho, waxay qaadataa kudhowaad 3 ilaa 4 sano inaad kudhameyso shahaadada PhD ee Australia.
Ardayga PhD ma ka shaqeyn karaa Australia waqti buuxa?
Ardayga cilmi baarista PhD ee Australiyaanka ah, gudaha ama kuwa caalamiga ah, wuu shaqeyn karaa waqti buuxa illaa intaad sameyn kartid iyada oo aan wax carqalad ah lagaarsiinin tacliintaada.
Xaqiiq ahaan, waad dib ugu laaban kartaa ilaa 4 sano oo aad si buuxda uga shaqeyn karto Australia kadib qalinjabintaada arday caalami ah.
Waa maxay Qiimaha Barnaamijka Waqtiga buuxa ee PhD-da ee Australia?
Qiimaha lagu sameeyo PhD-da Australia wuxuu u dhexeeyaa AUD $ 14,000 ilaa AUD $ 37,000 iyadoo kuxiran iskuulka iyo goobta waxbarashada, laakiin waxaad dalban kartaa barnaamijyo deeqo waxbarasho oo kala duwan si aad uga caawiso maalgalintaada waxayna kaa caawin kartaa hoos u dhigida ama nadiifinta dhammaan kharashaadka maaliyadeed. .
Waxaa jira barnaamijyo deeqo waxbarasho oo kaladuwan oo loo heli karo ardayda PhD, qaar baa si buuxda loo maalgeliyaa halka kuwa kalena qayb ahaan la maalgeliyo laakiin iyadoon loo eegin taas, waxay ka caawiyaan culeyska dhaqaale ee helitaanka PhD laga helo Australia. Maqaalkan, waxaad ku ogaan doontaa qaar ka mid ah barnaamijyadan deeqaha waxbarasho iyo sida loo dalbado.
Ma fududahay in PhD laga helo Australia deeq waxbarasho?
Helitaanka PhD ee Australia oo leh deeq waxbarasho waxay kuxirantahay waxqabadkaaga tacliimeed sida GPA-gaaga, Natiijada sharafta taas oo inta badan kiisaska koowaad iyo gudbinta shuruudo kale oo kasta oo looga baahan yahay barnaamijka deeqda waxbarasho ama jaamacadda bixisa deeqda waxbarasho.
Haddii aad ka gudubto shuruudaha u-qalmitaanka oo aad ku dalbato waqtiga saxda ah, taas oo ah, ka hor dhammaadka deeqda waxbarasho, markaa waad istaagi kartaa fursad caddaalad ah oo aad ku guuleysato deeqda waxbarasho ee Australiya.
Sideen ugu heli karaa PhD gudaha Australia deeq waxbarasho?
Deeqaha badankood waxay ku saleysan yihiin ama ku saleysan yihiin baahi, markaa hubi inaad ku dhacdo mid ama labada qaybood ka hor intaadan tixgelin codsashada barnaamijka deeqda waxbarasho.
Deeq waxbarasho oo ku saleysan: deeqaha waxbarasho waxaa la siiyaa ardayda iyadoo lagu saleynayo waxqabadka akadeemiyadeed ee wanaagsan, tabarucaadka wanaagsan ee dugsiga ama bulshada, xirfadaha hoggaaminta iyo ka-qaybgalka hawlaha manhajka ka baxsan sida dawladda ardayda ama isboortiga.
Deeqaha ku saleysan baahida: deeqdan waxbarasho waxaa la siiyaa ardayda arrimaha dhaqaalaha ama ardayda ka soo jeeda guryaha iyo saboolnimada saboolnimada, ardayda ka socota waddamada ay dagaallada ka socdaan, iwm.
Hay'adaha qaarkood waxay bixiyaan deeqo waxbarasho oo ku saleysan mid ka mid ah shuruudaha kor ku xusan ama labadaba halka sidoo kale ay jiraan hay'ado leh ikhtiyaarro qiimeyn dheeraad ah oo ay ku bixiyaan deeqaha waxbarasho.
Dalbashada deeqo waxbarasho oo aad u badan ayaa ah mid waxtar leh maadaama deeqaha waxbarasho ay yihiin kuwo tartan badankoodna qaata in ka yar 1% ee codsadayaasha. Kaliya waxaad ku kordhin kartaa fursadahaaga ku guuleysiga deeqda waxbarasho adigoo dalbaya dhowr ka mid ah. Codso asal ahaan fursad kasta oo deeq waxbarasho ah oo aad buuxiso shuruudaha dalabka.
Sidoo kale codsashada deeqda waxbarasho waqtigeeda waa khamaaris kale oo lagu guuleysto deeqaha waxbarasho. Inta badan codsiyada deeqda waxbarasho ee loo gudbiyo xilliga kama dambaysta ah xitaa dib looma eegin gabi ahaanba, hay'adda deeqaha ayaa laga yaabaa inay heshay codsadayaal ku filan oo aqoon leh sidaa darteed waxay sameyn doonaan ayaa ah inay iska tuuraan inta hartay hadey u qalmaan iyo in kale.
Samee cilmi-baaris joogto ah oo ku saabsan PhD-da la heli karo ee Australia oo leh deeqo waxbarasho, lana hadal qoyska, saaxiibbada, macallimiinta, macallimiintii hore iyo xiriirrada dibedda ee ku saabsan raadintaada deeqda waxbarasho ee Australiyaanka ah haddii ay dhacdo in qof kasta oo soo baxa uu awoodi karo inuu kugu wargeliyo waqtiga loogu talagalay.
Maaddaama aad rabto deeqda waxbarasho ee 'PhD' ee Australia, waa inaad haysataa rukhsaddaada waxbarasho ee Australiya sidii arday caalami ah, lagu qoro barnaamijka PhD ee jaamacadda Australiya ee la aqoonsan yahay ama inaad isqorto mid.
Diyaarso dhammaan dukumiintiyada saxda ah ee deeqda waxbarasho, sida bayaanka shakhsiyeed, warqadda gelitaanka, soo jeedinta cilmi baarista, qoraalka tacliinta, oggolaanshaha daraasadda, caddeynta aqoonta luqadda Ingiriisiga, GRE & GMAT, waraaqaha talooyinka ee macallimiintii hore, macallimiinta iyo shaqaalaha, iwm.
Dukumiintiyada kale ee ka baxsan kuwa halkan ku taxan waxaa laga yaabaa inay u baahdaan hay'addaada barnaamijka deeqda waxbarasho, markaa u akhri shuruudaha deeq-lacageedka iyo shuruudaha si habboon kahor codsiga ama la xiriir hay'adda martida loo yahay wixii macluumaad dheeraad ah.
Hoos waxaa ku yaal liiska qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugufiican ee PhD ee Australia oo aad ku bilaabi karto dhaqdhaqaaqaaga deeqda waxbarasho.
Deeqda waxbarasho ee ugu wanaagsan PhD-da Australia
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) Deeqda Cilmi-baarista Jaamacadda
Barnaamijka Tababbarka Cilmi-baarista Dowladda Australia (RTP) Deeqaha
Jaamacadda Bond Deeqaha HDR
Deeqda Cilmi-baarista ee Adelaide
Deeqaha Cilmi-baarista ee Shahaadada Sare
Sidoo kale waa inaad ogaataa inay jiraan dhowr jeer oo deeq waxbarasho oo PhD ah oo u yimaada ardayda doonaya inay wax ku bartaan Australia laakiin deeqahaas ma ahan kuwo sanadle la heli karo, qaar iyaga ka mid ah ayaa mar uun yimaada marna dib uma soo noqdaan laakiin waad ka faa'iideysan kartaa mid ka mid ah iyaga xitaa in mar aad la kulanto iyaga.
RMIT waxay bixisaa deeqo waxbarasho oo isdaba-joog ah oo lagu taageerayo ardayda PhD-da daraasaddooda cilmi baarista, dalabka deeqdani wuxuu u furan yahay ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudahaba.
Codsadeyaasha cusub ee doonaya inay wax ku bartaan barnaamijka shahaadada PhD-da iyada oo loo marayo deeqda waxbarasho ee Jaamacadda RMIT, waa inay soo gudbiyaan Muujinta Xiisaha (EOI) inta lagu jiro arjiga gelitaanka oo muujineysa inaad codsaneyso oggolaansho iyo deeq waxbarasho labadaba.
Si aad ugu qalanto deeqdan waxbarasho, codsadayaashu waa inay buuxiyaan shuruudaha gelitaanka ee barnaamijka PhD ee jaamacadda ama ay hadda ku qoran yihiin barnaamijka PhD, ardayda caalamiga ahi waa inay sidoo kale la kulmaan shuruudaha aqoonta luuqadda Ingiriisiga iyagoo siinaya imtixaan aqoon xirfadeed oo Ingiriis ah sida TOEFL , IELTS ama wixii kale ee la aqbali karo.
Ugu dambeyntiina, codsadayaasha waxaa lagu xushaa iyadoo lagu saleynayo xirfadaha gaarka ah, guusha waxbarashada, wax soo saarka cilmi baarista iyo khibradda xirfadeed ee wax ku oolka ah Deeqdani waxay u furan tahay dhammaan ardayda PhD-da qayb kasta oo wax ka barata jaamacadda.
Deeqda waxbarasho ee RTP waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee deeqda waxbarasho ee PhD ee Australia oo ay bixiso dowladda Australia waana u furan tahay dalabka ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee doonaya inay ku sii wataan barnaamijka shahaadada sare ee jaamacadeed ee jaamacadaha Australia.
Si kastaba ha noqotee, deeqdani waxay heli kartaa oo keliya ardayda PhD ee qaar ka mid ah jaamacadaha Australia oo dhammaantood maahan. Waxaad ka heli kartaa jaamacadaha u qalma Halkan.
Mid kasta oo iyaga ka mid ah sidoo kale wuxuu leeyahay habab codsi iyo xulashooyin kala duwan, markaa si taxaddar leh u dhex mar shuruudaha dalabka iyo bogga hawsha ama la xiriir jaamacadda aad martida u tahay haddii aad xaq u leedahay, sida loo codsado barnaamijka deeqda waxbarasho
Deeqda waxbarasho ee RTP waxay u dhigantaa $ 43,885 ardaykiiba ugu yaraan saddex sano illaa ugu badnaan afar sano waxayna daboolayaan mid ama in ka badan oo soo socda;
Lacagta la bixiyay ee la xidhiidha kharashka ku baxa shahaadooyinka cilmibaadhista.
Jaamacadda Bond waxay siisaa deeqo waxbarasho ardayda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee damacsan inay waxbartaan ama horeyba u bartaan barnaamijka shahaadada PhD ee Jaamacadda Bond. Deeqda waxbarasho ee 'HDR' waxay daboolaysaa khidmadaha waxbarashada iyo kharashyada nolosha waxaana lagu qiimeeyaa $ 28,092 sanadkiiba arday kasta.
Kahor intaadan dalban deeqdan waxbarasho ee PhD waa inaad marka hore u gudbisaa Muujinta Xiisaha (EOI) macallimiinta, ka dibna codso gelitaanka Jaamacadda Bond ka dib taas oo aad horay ugu sii socon karto inaad dalbato deeqda waxbarasho.
Codsigaaga deeqda waxbarasho waa inuu bilaabmaa mar haddii laguu oggolaado gelitaanka barnaamijka aad doorbideyso oo ah marka aad hesho warqad dalab ah oo laguu oggolaado Jaamacadda Bond.
Jaamacadda Adelaide waxay bixisaa deeq waxbarasho sanadle ah oo u dhiganta $ 28,000 illaa iyo 3 sano ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee doonaya inay isqortaan ama horeyba ugu qoreen Ph.D. barnaamijka shahaadada ee Jaamacadda Adelaide.
Ardayda waxaa lagu xushay iyadoo lagu saleynayo waxqabadkooda tacliimeed kiiskanna, waa inaad ku qalin jabisaa maamuus heerka koowaad ah barnaamijka shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad ee cilmi-baarista.
Kuwani waa taxane deeqo ah oo ay bixiyaan aasaaska sadaqada iyo shakhsiyaad deeqsi ah si ay u taageeraan tababarka cilmi-baarista qalin-jabinta ee ardayda doonaya inay wax bartaan ama horeyba u baranayaan shahaadada dhakhtar ee Jaamacadda Western Australia (UWA).
Deeqdan waxbarasho waxaa lagu bixiyaa oo keliya iyada oo loo marayo UWA iyo kaliya ardayda mustaqbalka ee mustaqbalka iyo hadda. Dhammaantood waa kuwo si buuxda loo maalgeliyey oo ka hadlaya khidmadaha waxbarashada, kaalmada nolosha, iyo gunnooyinka safarka iyo cilmibaarista ee ardaygiiba illaa 3 sano. Codsadeyaasha waxaa lagu xushay waxqabadkooda tacliimeed iyo tabarucaadka cilmi baarista.
Jaamacadda Western Australia waa mid ka mid ah hay'adaha cilmi-baarista ee ugu sarreeya Australia waxayna siisaa daraasiin deeqo ah ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee horeyba u sii waday barnaamijka shahaadada jaamacadeed ee jaamacadda.
Kuwani waa deeqaha waxbarasho ee ugu wanaagsan PhD-da Australia, waa kuwo si buuxda loo maalgeliyo, ugu yaraan daboolaya kharashka waxbarashada iyo dhowr kharashyo kale. Kuligood way soconayaan illaa iyo inta barnaamijka PhD uu ku sii socdo taas oo ka dhigaysa ardaygu inuu ka faa'iideysto illaa uu ka qalinjabiyo.
Waa kuwan qaar ka mid ah qoraalladeenna waxaan u maleynayaa inaad sidoo kale waxtar u yeelan karto;
Sida loogu guuleysto deeqda waxbarasho ee Phd ee Kanada
Barnaamijka masters-ka ee bilaashka ah ee adduunka
Jaamacadaha ugu Fiican ee Australia
Koorsooyinka Shahaadada Khadka Tooska ah ee Xirfadeed
Iskuulada ugu Fiican Dugsiyada Injineeriyada Dunida
Deeqaha Australia Deeqaha PhD Barashada Hagaha Dibadda Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo
Australia Deeqaha PhDdeeqda waxbarasho ee ugufiican ee Australiaphd ee Australia oo leh deeq waxbarashoDeeqaha PhD ee Australia
Previous Post:35 Su'aalo qoto dheer oo ku saabsan Ilaahey oo adiga ku cajab galin doona
Post Next:17 Koorsooyinka Online-ka ee Bilaashka ah ee Jaamacadda Princeton